— Boqortooyada Akkadiyaanka —
Maabka boqortooyadii Akkadiyaanka (midabka cowlan) iyo jihada ciidamada xoogu u socdeen (huruud).
Boqor Saargoon waa ninkii mideeyay in badan oo dadka Mesobotaamiya ah.
Dhacdaa: Coordinates: Unknown argument format
Luuqadaha & Diimaha:
2334 C.H ilaa 2193 C.H
XukunkaBoqorka ugu awooda badna:
Saargoon (2334 ilaa 2279 C.H.)
800,000 km2 (300,000 sq mi)
Akkad waa caasimada boqortooyadii akkadiyaanka hore oo maamuli jireen dadka reer Akkadiyaan ee deegaanadii hore ee Mesobotaamiya taasi oo midaysay dhamaan dadka ku hadla luuqadaha "Semiteka" iyo Sumeeriyaanka.
Qiyaastii 3000 sano C.H (Ciise Hortii) ayaa waxaa bilaabmay isdhexgalka bulshooyinka dadka ku hadla luuqada Semite oo ah Akkadiyaanka iyo bulsho weynta Sumeeriyaanka ooy jaar ahaayeen. Wakhti yar ka dib, Sumeeriyaanku waxay ku dhex milmeen Akkadiyaanka isla markaana ku midoobeen hal maamul oo ka dhexeeya.
Boqortooyada Akkadiyaanku waxay gaadhay meeshii ugu sareeysay qarnigii 24aad ilaa qarnigii 22aad C.H. wakhtigaas oo uu maamulaayay boqorkii isku xidhay Akkadiyaanka waa boqor Saargoon (Sargon) oo noolaa 2334 C.H ilaa 2279 C.H.
Mudo dheer ka bacdi, markii boqortooyadii Akkadiyaanku burburtey waxay u kala baxeen labo maamul oo dhex yaala degaanada mesobotaamiya kuwaas oo kala noqday: dadka ku hadla luuqada Semetikga ee deegaanada waqooyi oo samaystey Assiyriya; iyo kuwa koonfureed oo qarniyo ka dib yeeshay boqortooyada Baabiyloonta cusub.
Maqaalkan waa la bilaabay. Hadii aad wax ka taqaanid fadlan ku caawi Wikipedia in aad . Qoraalkaagu ha noqdo mid faa'iido leh oo dhexdhexaad ah.
العربية: أكاد (مدينة)
български: Акад (град)
English: Akkad (city)
فارسی: اکد (شهر)
français: Akkad (ville)
हिन्दी: अक्कदी सभ्यता
italiano: Akkad (città antica)
Кыргызча: Аккад шаары
Nederlands: Akkad (stad)
norsk nynorsk: Akkad
polski: Akad (miasto)
português: Acádia (cidade)
Scots: Akkad (ceety)
srpskohrvatski / српскохрватски: Akad
Simple English: Akkad
slovenčina: Akkad (mesto)
slovenščina: Akad (mesto)
српски / srpski: Акад
Tagalog: Akkad (siyudad)